uknepalnews.com | ओली सरकारमा पनि ठगिँदैछ सुदूरपश्चिम !-भीष्म थापा
Home > कुराकानी > ओली सरकारमा पनि ठगिँदैछ सुदूरपश्चिम !-भीष्म थापा
ओली सरकारमा पनि ठगिँदैछ सुदूरपश्चिम !-भीष्म थापा
काठमाडौं, सुदूरपश्चिम, यो नाम कसले जुराएको हो थाहा छैन । तर यो शब्दले एउटा विशिष्ट अर्थ, मनोविज्ञान र मानसिकताको निर्माण गरेको छ ।
भाषा विज्ञानमा शब्दले एउटा विशिष्ट अर्थबोध राखेको हुन्छ । सुदूरपश्चिम भन्ने शब्दले एउटा पछाडि परेको, सामाजिक विकास नभएको, राज्यबाट उपेक्षित, आफ्नो मौलिक पहिचान बोकेको भौगौलिक क्षेत्रलाई बुझाउँछ । र, अहिले भने यो सुदूरपश्चिम प्रदेश नं. ७ भनेर लेख्न थालिएको छ ।
सुदूरपश्चिमको सांस्कृतिक या भौगौलिक विशेषतासँगै एउटा विशेषता अर्को पनि हो । त्यहो यो क्षेत्र नेपालमा सबैभन्दा पछाडि एकीकरण भएको क्षेत्र हो । अर्कोतर्फ, यो क्षेत्र राज्यको मूलप्रवाहिकरणमा कहिल्यै पनि पर्न सकेन । राज्यका कतिपय निकायमा प्रधानमन्त्रीदेखि अन्य पदमा यस क्षेत्रका मानिसहरुको प्रतिनिधित्व भएपनि राज्य संरचनामा भने यो क्षेत्रले निर्णायक अर्थ राख्न सकेन । त्यसैले हरेक बजेट, हरेक परियोजना र कार्यक्रम, राज्यका अन्य सेवा सुविधालगायतका पक्षमा यो क्षेत्र सधैं ठगिँदै आयो । उपेक्षित हुँदै आयो । यहाँको गरिबीलाई गैरसरकारी संस्थाहरुले मीठो प्रस्तावमा ढाले, कर्णालीदेखि सुदूरपश्चिमका दलित र गरीबका दयनीय अनुहार कतिपय फिल्म र पोष्टरका आकर्षक विषय बने, तर उनीहरुको जीवनमा भने निर्णाय असर पार्न राज्यले कुनै विशेष अभियान या योजना अघि सारेन । जे भयो, त्यो एउटा निरन्तरतास्वरुप मात्रै भयो । सुदूरपश्चिमको भाग्यमा क्रमभंगता कहिल्यै भएन ।
बिडम्बना, राज्यसत्ताको बाँडफाँड हुने बेला फेरी सुदूरपश्चिमले पुरानै नियती भोग्ने अवस्था देखिएको छ । यसको छनक सरकारको बिस्तारको प्रक्रियाबाट स्पष्ट देखिएको छ ।
यसपटक समृद्धि, विकास र सुशासनको मुख्य नारासहित माओवादी केन्द्र र एमालेबीच वाम गठबन्धनको घोषणा भयो, निर्वाचन भयो । सुख, समृद्धि र विकासको चाहना सबैभन्दा बेसी रहेको हुटहुटी सुदूरपश्चिममा देखियो । निकै विशिष्ट मत पायो वाम गठबन्धनले । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाको क्षेत्र भनेर चिनिने यो क्षेत्रमा दुई तिहाई मत वामपन्थीहरुले ल्याए । यो त्यहाँका जनताको परिवर्तनप्रतिको चाहनाको उदबोध थियो ।
तर, बिडम्बना, राज्यसत्ताको बाँडफाँड हुने बेला फेरी सुदूरपश्चिमले पुरानै नियती भोग्ने अवस्था देखिएको छ । यसको छनक सरकारको बिस्तारको प्रक्रियाबाट स्पष्ट देखिएको छ ।
नेकपा एमालेका लागि सुदूरपश्चिमले निर्णायक अर्थ राख्दै आएको छ । ठीक यही कुरा नेकपा माओवादी केन्द्रका लागि पनि सत्य हो । तर सरकार बिस्तार गर्ने क्रममा सुदूरपश्चिमलाई फेरी बजेट र योजना नहुने र प्रतिनिधिका लागि प्रतिनिधि भनेजस्तो टोकन मन्त्रालय दिने र सकेसम्म त्यो पनि दिन नपाए हुन्थ्यो भन्ने मानसिकता स्पष्ट देखिएको छ । नेकपा एमालेले अहिलेसम्म यसबारेमा कुनै आधिकारिक धारणा अगाडि सारेको छैन । त्यो क्षेत्रबाट एमालेको प्रतिनिधित्व गर्ने कसलाई सरकारमा सहभागी गराईन्छ या गराइन्न भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । माओवादी केन्द्रका हकमा प्रदेश नं. ७ ले एकमतले सिफारिस गर्दा पनि केन्द्रमा त्यसविरुद्ध समेत आवाज उठेको चर्चा सार्वजनिक भएको छ ।
त्यसो भए हामी के को र कसको समृद्धिका लागि सत्ता र सरकारको सञ्चालन गर्दैछौं ? भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा भनेर जति नारा लगाए पनि त्यो गाउँका जनता सिंहदरबारमा आउने वातावरण बनाइएन भने त्यो अधिकार बीचैकाले खाइदिने कुरा भनिरहनु पर्दैन ?
हिजोका दिनमा मधेसलाई राज्यले उपेक्षा गरेका कारण नै देशले मधेस आन्दोलनका नाममा यति ठूलो क्षति ब्यहोर्नु पर्यो । अहिले मधेस सम्बोधन गर्नैपर्ने एउटा माग बनेको छ । यही अवस्था सुदूरपश्चिमको पनि हुन्न भन्न सकिन्न।
त्यसैले आम सुदूरपश्चिमवासीको एउटै चाहना यो सरकारमा पनि ठगिन नपरोस् भन्ने हो । सुदूरपश्चिमका मानिसको बुद्दि नै नहुने या उनीहरुले सत्ता सन्चालन नै गर्न नसक्ने भन्ने मानसिकता परित्याग भएन भने मधेस आन्दोलनजस्तै प्रदेश सातका जनताभित्र पनि राज्यसत्तासँगको विद्रोही चेतले झन प्रश्रय पाउने कुरामा शंका गर्नु पर्दैन ।
हिजोका दिनमा मधेसलाई राज्यले उपेक्षा गरेका कारण नै देशले मधेस आन्दोलनका नाममा यति ठूलो क्षति ब्यहोर्नु पर्यो । अहिले मधेस सम्बोधन गर्नैपर्ने एउटा माग बनेको छ । यही अवस्था सुदूरपश्चिमको पनि हुन्न भन्न सकिन्न। सरकारमा सुदूरपश्चिमको यथोचित र सम्मानित प्रतिनिधित्व भएन भने, कार्यक्रम, योजना,प्रतिनिधित्व र बजेटमा सुदूरपश्चिमको प्रतिनिधित्व हुन सकेन भने र सुदूरपश्चिमको गरिबी र दयनीयतालाई तस्वीरमा पस्केर बेच्ने काम रोकिएन भने त्यो क्षेत्रको आक्रोस समेत विष्फोटक भएर नजाला भन्न सकिन्न ।
हामी वाम गठबन्धनको साझा घोषणापत्र र अहिले आएर नयाँ बन्न थालेको कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्र पालना गर्ने कुरा गरिरहेका छौं । त्यो घोषणापत्रले सुदूरपश्चिमको स्वामित्व लिन सक्छ कि सक्दैन ? यदि सक्छ भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको समेत ग्यारेण्टी हुनुपर्छ । आशा राखौं, यसपाली नठगियोस् सुदूरपश्चिम फेरी फेरी राज्यसत्ताबाट ।
प्रचण्ड : पाँच आन्दोलनका नेता-मनहरि तिमिल्सिना